al-Shabaab oo Weerartay Ciidamada Kenya ee Kulbiyow ku Sugan.
Saaxiib Email Ahaan Ugu Dir
Maleeshiyo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa xalay saqdii dhex weerar culus ku qaaday saldhigyo ay ciidamada Kenya ee AMSIOM iyo kuwa Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyoow ee Gobbolka Jubbada Hoose.
Goobjoogayaal ku suggan deegaanka Xaluuqo ee dalka Kenya oo u dhow deegaanka Kulbiyoow ayaa VOA u sheegay in maleeshiyaadkii Alshabaab ee weerarka ku qaaday Kulbiyoow ay iska caabin kala kulmeen ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee AMISOM.
Ciidamada Kenya ayaa la sheegay inay ku jawaabeen madaafiic culus, taasoo sababtay in Maleeshiyaadkii Alshabaab ay dib u gurasho sameeyaan.
Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay dagaalka xalay ka dhacay deegaanka Kulbiyoow, waxaana wali hawada ka maqan Isgaarsinta deegaanka Kulbiyoow.
Maleeshiyaadka Al shabaab ayaa horraantii sanadkaan weerar ay ku qaadeen saldhig ay ciidamada KDF ku leeyihiin Kulbiyoow waxay ku dileen tobannaan ka tirsan ciidamada Kenya ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya.